ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုနှင့်ရမှတ်များ: အများဆုံးမကြာခဏဒဏ်ငွေ | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် စီမံခန့်ခွဲမှုတုံ့ပြန်မှုနေသောပိတ်ဆို့မှုများ ထုတ်လုပ်အသွားအလာဒဏ်ငွေရန်။
အခါ ပြစ်မှုသည်ကြီးလေးသောရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည် နှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှု၌တည်၏။ အခုအများဆုံးဒဏ်ငွေကဘာလဲ?
မြန်ဆန်- အများအားဖြင့်ယူရို ၁၀၀ မှ ၅၀၀ ကြားမှာပြစ်ဒဏ် ၂ မှတ်မှ ၆ မှတ်အထိကျခံရလိမ့်မယ်။
အရက်အလွန်အကျွံဒဏ်ငွေယူရို ၅၀၀ အထိပေးဆောင်ရမည်။ လိုင်စင်မရှိဘဲလေးမှတ်နှင့်သုံးလဆုံးရှုံးရမည်။ အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဆင့်များအရ၎င်းသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဘီးမှာမိုဘိုင်းအသုံးပြုခြင်း- ယူရို ၂၀၀ အထိငွေရေးကြေးရေးအရအပြစ်ဒဏ်နှင့်အချက်သုံးချက်ဆုံးရှုံးခြင်း။
နိမိတ်လက္ခဏာကိုလေးစားခြင်းမရှိပါ STOP, ဖြည့်စွက်, ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်အလင်းအိမ်။ ဤအမှုများတွင်ဘဏ္penaltyာရေးပြစ်ဒဏ်သည်ယူရို ၂၀၀ အထိရနိုင်သည်။
မတော်လျော်သောကားရပ်နားရန်နေရာ။ ခွင့်ပြုချက်မရှိသောinရိယာများတွင်ကားရပ်နားသည့်နေရာတွင်ဒဏ်ငွေသည်ယူရို ၂၀၀ ဖြစ်နိုင်သည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ \_ t သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလုံးနည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ဒါဟာအကြောင်းပါ မတော်တဆမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးဤနယ်မြေအတွင်းလူမှုရေးအတူတကွနေထိုင်မှုကိုထိန်းညှိပါ။
လက်တွေ့တွင်။o ချိုးဖောက်မှုအားလုံးသည်စီးပွားရေးအရဒဏ်ခတ်အရေးယူခြင်းခံရသည်။ ပိတ်ဆို့မှုအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်, ပြစ်မှု၏သဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်မှုသည်ပိတ်ဆို့မှုအမျိုးအစားအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများသည်နှစ်စဉ်မတော်တဆမှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမတူကွဲပြားမှုများ၊ အမျိုးမျိုးသောဒဏ်ရာများနှင့်သေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒဏ်ငွေများသည်စီးပွားရေးပြissueနာတစ်ခုတည်းသာမကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုမှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းရသောပြaနာတစ်ခုရှိကြောင်းလည်းပြသသည်။ အခြေခံကျကျပညာရေးပြproblemနာပါ.
ပုံရိပ်ရင်းမြစ် - Autopista.es
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » စက် » အများဆုံးမကြာခဏဒဏ်ငွေ